Fanamarinana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > fanamarinana
Ny fanamarinana dia asan’ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy sy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, izay hanamarinana ny mino eo imason’Andriamanitra. Noho izany, amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy, no ahazoan’ny olona famelan-keloka avy amin’Andriamanitra, ary mahita fiadanana amin’ny Tompo sy Mpamonjy azy izy. Kristy no taranaka ary ny fanekena taloha dia lany andro. Ao amin’ny fanekena vaovao, ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra dia miorina amin’ny fototra hafa, miorina amin’ny fifanarahana hafa. ( Romana 3:21-31; 4,1- enina ambin'ny folo; 5,1.9; Galatianina 2,16)
Ny fanamarinana amin'ny finoana
Niantso an’i Abrahama avy tany Mezopotamia Andriamanitra ary nampanantena ny taranany fa hanome azy ireo ny tany Kanana. Rehefa tany amin’ny tany Kanana i Abrahama, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’ny Tompo tamin’ny alalan’ny fanambarana hoe: Aza matahotra, ry Abrama! Izaho no ampinganao sy valisoa lehibe ho anao. Fa hoy Abrama: Jehovah Andriamanitro ô, inona no homenao ahy? Mandeha tsy manan-janaka aho, ary Eliëser avy any Damaskosy mpanompoko no hanana ny tranoko ... Tsy nomenao taranaka aho; ary, indro, ny iray amin'ny mpanompoko no ho lovako. Ary indro, hoy ny Tompo taminy: Tsy ho lovanao izany, fa izay haterakao no ho lovanao. Ary nasainy nivoaka izy ka nanao hoe: Atopazy ny lanitra, ka isao ny kintana; azonao isaina izy ireo Ary hoy izy taminy: Ho maro tokoa ny taranakao! (1. Mosesy 15,1- iray).
Fampanantenana tsy nampoizina izany. Fa ny tena nahagaga kokoa dia ny vakintsika ao amin'ny andininy 6: "Abrama dia nino ny Tompo ka nisaina azy ho fahamarinana." Ity dia fanambarana milaza ny fanamarinana amin'ny finoana. I Abrahama dia noheverina ho marina noho ny finoana. Ny Apôstôly Paoly dia namelatra izany hevitra izany bebe kokoa ao amin'ny Romana 4 sy Galatianina 3.
Ny Kristianina dia nandova ny fampanantenan’i Abrahama noho ny finoana — ary ny lalàna nomena an’i Mosesy dia tsy afaka manafoana izany fampanantenana izany. Io fitsipika io no ampiasaina ao amin’ny Galatianina 3,17 nampianarina. Fizarana manan-danja manokana ity.
Minoa, tsy lalàna
Ao amin’ny Galatianina, i Paoly dia nanohitra ny fivavahan-diso ara-dalàna. Ao amin’ny Galatianina 3,2 mametraka ny fanontaniana izy:
"Te-hahafantatra aho avy aminao irery: efa nandray ny Fanahy tamin'ny asan'ny lalàna va ianao sa tamin'ny fitoriana ny finoana?"
Mametraka fanontaniana mitovy amin'izany ao amin'ny andininy faha-5 izy io: "Iza ankehitriny no manolotra anareo Fanahy ary manao asa toy izany eo aminareo, manao ny asan'ny lalàna ve sa amin'ny fitoriana ny finoana?"
Hoy i Paoly ao amin’ny andininy 6-7: “Toy izany koa i Abrahama: nino an’Andriamanitra izy, ka nisaina ho fahamarinany izany. Koa fantaro fa izay amin’ny finoana no zanak’i Abrahama. Nanonona teny i Paoly 1. Mosesy 15. Raha manam-pinoana isika, dia zanak'i Abrahama. Mandova ny fampanantenana nataon’Andriamanitra taminy isika.
Mariho ny andininy faha-9: "Koa izay manam-pinoana dia voatahy miaraka amin'i Abrahama mino." Ny finoana dia mitondra tso-drano. Fa raha miankina amin'ny fitandremana ny lalàna isika dia ho voaheloka. Satria tsy mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna isika. Fa Kristy kosa namonjy antsika amin'izany. Maty ho antsika Izy. Mariho ny andininy faha-14: "Nanavotra antsika Izy, mba ho tonga eo amin'ireo Jentilisa ao amin'i Kristy Jesosy ny fitahian'i Abrahama ary ahazoantsika ny fanahy nampanantenaina amin'ny alalan'ny finoana."
Avy eo i Paoly dia nampiasa ohatra azo ampiharina ao amin'ny andininy 15-16 mba hilazana amin'ny Kristiana any Galatia fa ny Lalàn'i Mosesy dia tsy mahavita manafoana ireo fampanantenana nomena an'i Abrahama hoe: "Ry malala, te hiresaka amin'ny zanak'olombelona aho: Lehilahy Rehefa dinihina tokoa, rehefa voamarina ny sitrapon’ny olona iray, dia tsy manafoana azy izy ary tsy manao na inona na inona momba izany. Ankehitriny dia efa nampanantena an'i Abrahama sy ny taranany ny fampanantenana. »
Io Jesosy "taranaka" io dia tsy i Jesosy irery ihany no mandova ny fampanantenan'i Abrahama. Nasongadin'i Paoly fa handova ireo fampanantenana ireo koa ny kristiana. Raha manam-pinoana an'i Kristy isika, dia zanak'i Abrahama ary mandova ny fampanantenana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Tonga eo amin'ny andininy faha-17 isika izao: "Fa izao no tiako holazaina: ny sitrapo izay nohamafisin'Andriamnitra teo aloha dia tsy ho foanana amin'ny lalàna nomena ny telopolo amby efa-jato taona taty aoriana, mba hanafoanana ny fampanantenana."
Ny lalànan'ny Tendrombohitra Sinay dia tsy afaka handrava ny fanekena tamin'i Abrahama, izay niorina tamin'ny finoana ny fampanantenan'Andriamanitra. Izay no nataon'i Paoly. Ny Kristiana dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny finoana, fa tsy lalàna. Tsara ny fankatoavana saingy mankatò ny fanekena vaovao isika fa tsy taloha. Nasongadin'i Paoly eto fa ny lalàna Mosesy - ilay fifanekena taloha - dia vetivety ihany. Nanampy izany raha tsy rehefa tonga Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny andininy 19: "Ahoana ary ny lalàna? Nampiana noho ny ota izany mandra-pahatongan'ny taranany nampanantenaina. »
Kristy dia ilay taranaka ary tsy hita intsony ny fanekena taloha. Ao anaty fifanarahana vaovao, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny fototra hafa, miorina amin'ny fifanarahana hafa izany.
Andao hamaky ny andininy 24-26: “Izao no lalàna natao fifehezantsika an'i Kristy, mba hohamarinina amin'ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy eo ambanin'ny fifehezana intsony isika. Satria ianareo rehetra dia zanak'i Kristy Jesosy amin'ny finoana an'Andriamanitra. » Tsy eo ambanin'ny lalàn'ny fanekena taloha isika.
Andao hanohy izany eo amin'ny andininy 29: "Fa raha an'i Kristy ianao, dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana." Ny dikan'ny hoe mandray ny Fanahy Masina miorina amin'ny finoana ny kristiana. Ara-pinoana isika amin'ny finoana na ambara ho olo-marina amin'Andriamanitra amin'ny finoana. Manamarina antsika amin'ny fototry ny finoana isika, tsy amin'ny fitandremana ny lalàna ary tsy azo antoka noho ny fanekena taloha. Raha mino ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, dia manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mifototra amin'ny finoana sy ny fampanantenana, mitovy amin'i Abrahama. Ny lalàna niampy ny Sinay dia tsy afaka manova ny fampanantenana nomena an'i Abrahama, ary ireo lalàna ireo dia tsy afaka manova ny fampanantenana nomena ny olona rehetra amin'ny finoana an'i Abrahama. Lasa tsy lany ity lalàna mifehy ny lalàna ity rehefa maty i Kristy ary efa ao anatin'ny fanekena vaovao isika izao.
Na dia ny famorana izay noraisin’i Abrahama ho mariky ny fanekeny aza, dia tsy afaka manova ny fampanantenana miorina amin’ny finoana tany am-boalohany. Ao amin’ny Romana 4, i Paoly dia nanasongadina fa ny finoany dia nanambara an’i Abrahama ho marina, ka noho izany dia nanjary nankasitrahan’Andriamanitra fony izy tsy voafora. 14 taona tatỳ aoriana, fara fahakeliny, no nandidy ny famorana. Tsy takina amin’ny Kristianina ankehitriny ny famorana ara-batana. Ny famorana izao dia resaka ao am-po (Romana 2,29).
Tsy mahavonjy ny lalàna
Tsy afaka manome antsika famonjena ny lalàna. Ny hany azony atao dia manameloka antsika satria mpandika lalàna avokoa isika. Efa fantatr'Andriamanitra mialoha fa tsy misy olona afaka mitandrina ny lalàna. Ny lalàna dia manondro antsika an'i Kristy. Tsy afaka manome antsika famonjena ny lalàna, nefa afaka manampy antsika hahita ny ilantsika famonjena. Manampy antsika izany hahatsapa fa tsy tokony ho fanomezana ny fahamarinana fa tsy zavatra azontsika atao.
Andao lazaina hoe ho avy ny Andro Fitsarana ary manontany anao ny mpitsara ny antony tokony avelany hiditra eo amin'ny sehatra misy azy izy. Ahoana no hataonao? Hilaza ve isika fa nitandrina lalàna sasany? Manantena aho fa tsy noho ny mpitsara afaka manondro ireo lalàna tsy nitazomina anay, fahotana izay nataontsika tsy nahalala ary tsy nanenina mihitsy. Tsy afaka milaza isika fa ampy tsara izahay. Tsia - ny hany azontsika atao dia mitalaho famindram-po. Mino isika fa maty i Kristy hanavotra antsika amin'ny ota rehetra. Maty Izy mba hanafaka antsika amin'ny sazin'ny lalàna. Io no hany fototry ny famonjena.
Mazava ho azy fa ny finoana dia mitarika antsika hankatò. Ny fifanekena vaovao dia manana safidy vitsivitsy ihany. Jesosy dia mitaky ny fotoanantsika, ny fontsika ary ny volantsika. Nofoanan'i Jesosy ny lalàna maro, saingy nohamafisiny ihany koa ny sasany amin'ireo lalàna ireo ary nampianatra fa tokony hotandreman'ny fanahy izy ireo, fa tsy didim-panjakana fotsiny. Mila mijery ny fampianaran'i Jesosy sy ny apostoly isika mba hahitana hoe ny fomba tokony hiasa kristiana ao amin'ny fiainantsika amin'ny fanekena vaovao.
Maty ho antsika i Kristy mba hivelomana ho azy. Afaka amin'ny fanandevozan'ny ota isika ary lasa andevon'ny fahamarinana. Antsoina isika mba hifanompo, fa tsy ny tenantsika. Takin'i Kristy amintsika izay rehetra ananantsika sy izay rehetra ananantsika. Angatahina hankatò isika - saingy ny finoana no voavonjy.
Voamarina amin'ny finoana
Afaka hitantsika izany ao amin'ny Romana 3. Ao amin'ny fizarana fohy i Paul dia manazava ny drafitry ny famonjena. Andao hojerentsika ny fomba nanamafisan'ity andalana ity ny zavatra hitantsika tao amin'ny Galatianina. «... satria tsy misy olona mety ho marina eo alohany amin'ny asan'ny lalàna. Fa avy amin'ny lalàna ny fahalalana ny ota. Fa ankehitriny kosa ny fahamarinana izay miharihary eo imason'Andriamanitra dia naseho, tsy misy lalàna, ary porofoin'ny lalàna sy ny mpaminany izany (and 20-21).
Ny soratra masina taloha dia nanambara mialoha ny famonjena amin'ny alalan'ny fahasoavana amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary tsy amin'ny lalàn'ny fanekena taloha izany fa amin'ny alalan'ny finoana. Io no fototry ny toe-piainan'ny Testamenta Vaovao momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Mpamonjy antsika.
Nanohy ny andininy 22-24 i Paoly hoe: "Fa ny fahamarinana no lazaiko eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho an'izay mino. Satria tsy misy fahasamihafana eto: samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manam-boninahitra tokony ho an 'Andriamanitra, ary tsy misy fahamendrehana manao fahasoavana amin'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny famonjena izay tonga tamin'i Kristy Jesosy. »
Satria maty ho antsika Jesosy dia azo lazaina ho marina isika. Manamarina izay mino an’i Kristy Andriamanitra, ka tsy misy hirehareha ny amin’ny fitandremany ny lalàna. Nanohy ny andininy faha-28 i Paoly hoe: "Koa ankehitriny mino izahay fa ny olona dia tsy manana asan'ny lalàna, amin'ny alàlan'ny finoana ihany."
Teny lalina nomen’ny apostoly Paoly ireo. I Jakoba, toa an’i Paoly, dia mampitandrina antsika amin’izay atao hoe finoana izay tsy miraharaha ny didin’Andriamanitra. Ny finoan’i Abrahama no nitarika azy hankatò an’Andriamanitra (1. Mosesy 26,4-5). Miresaka momba ny tena finoana i Paoly, ny karazana finoana izay ahitana ny tsy fivadihana amin’i Kristy, ny fahavononana tanteraka hanaraka azy. Fa na izany aza, hoy izy, dia ny finoana no mamonjy antsika fa tsy ny asa.
Amin’ny Romana 5,12 Hoy i Paoly: “Ary satria efa nohamarinina noho ny finoana isika, dia manana fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika; Izy koa no ananantsika fanatonana amin’ny finoana izao fahasoavana iorenantsika izao, ary ny fanantenana ny amin’ny voninahitra ho avy, izay homen’Andriamanitra antsika.”
Finoana no hananantsika fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Namana isika fa tsy fahavalony. Izay no ahafahantsika hijoro eo anatrehany amin'ny andro fitsarana. Mino ny toky nomen'i Jesosy Kristy antsika isika. Nanazava i Paoly ao Romana 8,1-4 koa:
"Koa ankehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ny lalàn'ny fanahy manome fiainana ho an'i Kristy Jesosy dia nanafaka anao amin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. Fa inona no tsy vitan'ny lalàna satria nalemy ny nofo, dia nataon'Andriamanitra: nandefa ny zanany lahy araka ny nofo mpanota ary noho ny ota ary nanameloka ny ota tamin'ny nofo, ka ny fahamarinana, izay notakin'ny lalàna, dia ho tanteraka amintsika izay tsy miaina araka ny nofo fa araka ny fanahy. »
Ka hitantsika fa mifototra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izany no fifanarahana na fanekena nataon'Andriamanitra tamintsika. Mampanantena izy fa hihevitra antsika ho marina raha manana finoana ny zanany lahy isika. Tsy afaka manova antsika ny lalàna, fa i Kristy no afaka. Ny lalàna dia manameloka antsika ho faty, fa Kristy kosa manome toky ny fiainana. Tsy afaka manafaka antsika amin'ny fanandevozan'ny ota ny lalàna, fa i Kristy kosa afaka. Manome antsika fahafahana i Kristy, saingy tsy fahalalahana afa-po io - fahalalahana ny hanompo azy.
Ny finoana mahatonga antsika ho vonona hanaraka ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra lazainy amintsika. Hitantsika ny didy mazava mba hifankatia, ny fahatokisana an'i Jesoa Kristy, ny fitoriana ny filazantsara, ny fiaraha-miasa amin'ny firaisana amin'ny finoana, ny hiangona ho fiangonana, ny fifanoloran'ny finoana, ny fanaovana asa tsara, ny fanaovana asa tsara, ny madio sy ny fitondran-tena. Ny miaina, hiaina am-pilaminana sy hamela ireo izay diso antsika.
Ireo didy vaovao ireo dia fanamby. Mandritra ny fotoanantsika rehetra izany. Ny androntsika rehetra dia nanokan-tena ho an'i Jesosy Kristy. Tokony hazoto hanao ny asany isika, ary tsy fomba midadasika sy mora izany. Asa sarotra, sarotra, asa izay vitsy no vonona.
Tokony hasongadintsika ihany koa fa tsy mahavonjy antsika ny finoantsika - tsy eken'Andriamanitra isika miankina amin'ny hatsaran'ny finoantsika, fa amin'ny alàlan'ny finoana sy ny fahatokiana an'i Jesoa Kristy Zanany. Ny finoantsika dia tsy hanao na inona na inona "tokony" - fa tsy voavonjy amin'ny ohatry ny finoantsika isika, fa amin'ny fahatokisana an'i Kristy izay manana finoana ampy ho antsika rehetra.